Okuqukethwe kwamaprotheni kwe- isilwane collagen liphezulu, futhi okuqukethwe kwamaprotheni kungaphezu kwama-85%, Ukudla kwalo kuphelele. Iqukethe izinhlobo ezingaphezu kwezingu-18 zama-amino acid, futhi iqukethe i-calcium, i-phosphorus, i-iron, i-manganese, i-selenium namanye amaminerali abalulekile kanye nezinto zokulandela umkhondo.
I-capsule engenalutho enzima yenziwe ngebanga elidliwayo le-gelatin yemithi ngemuva kokucubungula okuhle nezinto zokwakha zokubamba impuphu eqinile, izinhlayiya zegobolondo elingenalutho leqanda. Igobolondo le-Capsule line-bioavailability enhle futhi lingancibilika ngokushesha, ngokuthembekile nangokuphepha.
Okuphakelayo grade collagen yenziwe ngesikhumba sesilwane esikhethiwe nethambo njengezinto zokusetshenziswa, futhi ikhiqizwa ngokuhambisana ngokuqinile nobuchwepheshe bokucubungula ukudla nemvelo. It is refined through enzymatic hydrolysis, filtration, high-temperature inzalo, isifutho omiswe nezinye izinqubo.